Ukuphupha kukaSathana Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Iphupha ngoSathana. Amaphupha ahlala esithumelela imiyalezo. Ngaba uyafuna ukwazi indlela yokutolika amaphupha?
Igama elithi Sathana lithetha "umchasi" kwaye inemvelaphi yayo kwinkolo yamaJuda, ephenjelelwa ziimfundiso zakudala zasePersi. Ingcamango yomtyholi isadlala indima kwiinkolo ezininzi namhlanje; Ngokusekwe ekutolikweni kwamaphupha, umzekelo, amaSilamsi akholelwayo akholelwa kwi-Islam ukuba amaphupha amabi abangelwa nguSathana ngokwakhe.
USathana uvavanya abantu phambi kwenkundla yezomthetho kwaye ubamangalele ngezono zabo. Ngokwenkolo yobuKrestu, kuye kwavela umbono kaMtyholi, oqondwa nguSathana njengengelosi eyayiphikisiwe nxamnye noThixo ngenxa yemvukelo yakhe kwaye ngoku ibonakalisa ububi njengendawo ehambelana naye. Le ngqungquthela ye-amoral ikhupha umdla othile kuze kube namhlanje, obonakaliswe kwimibutho kaSathana kunye nezenzo, kodwa iphinda ibonakaliswe kumabhayisikobho nakumculo.
Njengenkosana yesihogo okanye inkosi yesihogo, uSathana uhlala eboniswa kwimifanekiso eneempondo, umsila kunye nonyawo lwehashe, uphawu lwakhe kukuziphatha okuthuthumbisa aboni.
Iphupha elifihliweyo neloyikisayo, apho umntu adibana naye buqu usathana, iya kuthi inike umphuphi ifuthe lokwenyani. Usenokuzibuza ukuba sithini na isazela sakho nento onokuthi ubopheleleke ngayo. Ekuchazeni iphupha lidlala indima ebonakalayo kwisimo sikaSathana kwaye kwenzeka ntoni ephupheni.
1 Uphawu lwephupha «uSathana» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «uSathana» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «uSathana» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «uSathana» - ukutolikwa ngokubanzi
Isimboli yephupha "uSathana" inamacala amabini ahambelanayo ekuchazeni iphupha. Kwelinye icala, kubandakanya ubumnyama. Apho isizathu e Ingqondo Ukuziphatha kuhlala kuwela ecaleni kwendlela ngaphandle komphefumlo kunye nentliziyo elungileyo. Iphupha elo kukwenza umphuphi alawule isimo sakhe sengqondo. Mhlawumbi uye waqhelanisa nendlela ocinga ngayo kunye nezenzo zakho unilaterally eya kwinzuzo kwaye uyityeshele imigangatho yokuziphatha.
Kwelinye icala, uSathana njengengelosi ewileyo ikwangumfuziselo wokungabinakuchazeka ekutolikweni kwamaphupha, kubonisa oko ukungavisisani kunye nokuyila. Ngokunokwenzeka umphuphi ukhawulelwe ziingcinga zakhe ezibaxiweyo zokuziphatha. Uphawu lwephupha lukucela ukuba wamkele isiqu sakho kwaye ufuna ngamandla.
Ukubona uSathana ephupheni phantse kuhlala kuvakala ngomphuphi njengemeko eyoyikisayo. Ukutolikwa kwephupha, oku kunokuba luphawu lwentlekele okanye ukubakho ngqu zulwano. Ukuba iphupha elinobuhlobo noBhelezebhule okanye iBhelezebhule, uphawu lwephupha lumkisa ngabahlobo bobuxoki. Ukuba ubulala uSathana ephupheni, ikwazisa isigqibo sokufulathela abo bahlobo.
Uphawu lwephupha "uSathana" lunokubonakala ngeendlela ezahlukeneyo ephupheni. Ukuba iphupha likubona ngendlela yamandla kunye nobutyebi, kuya kufuneka uqaphele ukuba impembelelo yakho ayonelanga ukunceda abanye.
Ukuba isikhulu sobumnyama singena ephupheni lomntu njengebhinqa, uya kujika kwisithandwa sakhe. Ekuchazeni amaphupha, uSathana angazimela nasemculweni - uphawu lwephupha lubonisa ukuba umphuphi uya kuwela emgibeni.
Uphawu lwephupha «uSathana» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo, uphawu lwephupha "uSathana" uxwayisa ngomlingiswa buthathaka lowaphuphi. Umphuphi uyazikhaba iimpawu ezithile zobuntu bakhe, ezinokuthi zingacinezelwa kuphela, kodwa zisekhona.
Ekuchazeni amaphupha, ukubonakala kukaSathana kucacisa isiphumo se ngqu zulwano phakathi kokuqonda kunye ne-subconscious. Umphuphi kufuneka ajongane neemfuno zakhe, inkanuko kunye noxinzelelo olucinezelweyo, olujamelana naye ngokwasemzimbeni ngophawu "lwephupha". Ukuba ungayilungelelanisa nezimvo zakho okanye uyamkele, unokusebenzisa amandla akhutshelwe ezinye izinto.
Uphawu lwephupha «uSathana» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba elidlulayo, uphawu lwephupha "uSathana" luphawu lobumnyama, ukudideka, kunye imikhosi emnyama. Ekuchazeni amaphupha, abaphuphi bahlala bechazwa isidingo sokujonga imeko yabo yengqondo kunye neyabahlobo babo ekuthiwa okanye ngabahlobo babo bokwenyani ngokuziphatha kwabo.